အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရောင်းရန်ရှိသော Roach ၏ခရီး ငါက Mac ပါ
ကန့်သတ်အချိန်ရောင်းဖို့တစ် Roach ၏ခရီး
တစ် Roach ၏ခရီး များသောအားဖြင့်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ် 16,99 €, နှင့်ကန့်သတ်အချိန်များအတွက်တရားမျှတမှုအဘို့သင့်နိုင်ပါတယ် 2,99 €။ တစ် ဦး Roach ၏ခရီး၏ဇာတ်လမ်းပြောပြသည် ကမ္ဘာ၏မျက်နှာပြင်ကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးစား။ မျှော်လင့်နေသောဖော်ရွေပိုးဟပ်နှစ်လုံး။ ပြင်ပသို့ရောက်သောအခါသူတို့နေထိုင်သောထူးဆန်းပြီးစိတ်ပျက်ဖွယ်အင်းဆက်ပိုးမွှားအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရသည် ကမ္ဘာပျက် post။ တစ်ဦး 3D ဂရပ်ဖစ်စွန့်စားမှု ဂျင်ပိုးပုံးအားဂျင်ကောင်ကိုဗုံးဒဏ်ခံနိုင်သည့်အမိုးအကာမှတဆင့်နံရံများနှင့်မျက်နှာကြက်များသို့အလွယ်တကူတက်နိုင်သည်။ ဒီဆန်းသစ်ပြောင်းလဲနေသောဂိမ်းစက်ပြင်သမားသည်ဖြစ်နိုင်ခြေအသစ်များကိုဖန်တီးပေးသည် လုံးဝအသစ်ပဟေိဒီဇိုင်း။ ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောမိန့်ခွန်းပူဖောင်းအသစ်များနှင့်မူရင်းဆွေးနွေးမှုအသစ်နှင့် တေးရေး ငါတို့ကိုကမ္ဘာ၏လေထုထဲသို့ပို့ဆောင်ပေးသည် Apocalyptic post.
ဒီဂိမ်းကကျွန်တော်တို့ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးသည် နျူကလီးယားစစ်၊ Apocalyptic ပတ်ဝန်းကျင်၊ မြုံနေသောနှင့်သက်မဲ့မြေများ။ ပိုးဟပ်တွေကဟားဟားကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောကြတယ် Mutant အင်းဆက်များသည်သူတို့၏နေအိမ်သို့ဗုံးဒဏ်ခံနိုင်သည့်အမိုးအကာအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးကမ္ဘာကိုလေ့လာရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ ဒီဂရပ်ဖစ်စွန့်စားမှုကသင့်ကိုကမ္ဘာရဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ကမ္ဘာကိုသယ်ဆောင်လာပါစေ Roaches Jim နှင့် Bud မျက်နှာပြင်သို့၎င်းတို့၏ခရီးအပေါ် join.
2 ဗားရှင်း ၃.၂.၇ ထဲတွင်ဘာအသစ်များ
ထူးခြားသောပတ်ဝန်းကျင်၌တစ် ဦး ကဂရပ်ဖစ်စွန့်စားမှု။
ကာတွန်းပုံစံ 3D လေထု။
Configure လုပ်ထားသည့် Controller ပံ့ပိုးမှု (ဂိမ်းကိုဖွင့်စဉ် [Alt] Key ကိုကိုင်ထားပါ။ )
ဗားရှင်း ၃.၂.၇ ထဲတွင်ဘာအသစ်များ
updated: 03 / 03 / 2014
အရွယ်: 341 ကို MB
ဘာသာစကားဂျာမန်၊ တရုတ်၊ ကိုးရီးယား၊ ဒိန်းမတ်၊ ဖင်လန်၊ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ အီတလီ၊ ဂျပန်၊ ဒတ်ခ်ျ၊
ဆော့ဖ်ဝဲရေး: Daedalic ဖျော်ဖြေရေး Gmbh
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » ကန့်သတ်အချိန်ရောင်းဖို့တစ် Roach ၏ခရီး
Apple Watch Hermes ၏ပထမဆုံးဖြုတ်ချခြင်း [ဗီဒီယို]
TwelveSouth သည်၎င်း၏လက်ရှိ BookBook အတွက် Bookarc ရပ်တည်ချက်အသစ်ကိုစတင်လိုက်သည်